EVY's Kitchen: စတော်ဘယ်ရီထဲက ချိစ်ကိတ်လေး
ချိစ်ကိတ်တွေစားရင် အီတယ်လို့ ထင်သူများအတွက် အဆင်ပြေမယ့် မုန့်လေးတစ်ခု ပြောပြပေးမယ်နော်။ အဲဒါကတော့ Cheese inastrawberry လို့ခေါ်တဲ့ စတော်ဘယ်ရီသီးထဲကို ချိစ်ပြန်ထည့်ထားတဲ့ အချိုပွဲလေးတစ်ခုပါပဲ။ အသီးအရသာချိုချဉ်လေးမှာ ချိစ်အရသာဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ တကယ်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ချောကလက်လေးပါပါသေးတာမို့ အရသာကတော့ ပြောဖွယ်ရာမရှိပါပဲ။ လုပ်နည်းလေးကို ကြည့်ကြရအောင်
စတော်ဘယ်ရီ ၂၀၀ ဂရမ်
ထောပတ် လက်ဖက်ရည် ဇွန်း ၂ ဇွန်း
ချောကလက် အနည်းငယ် ( မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်နှင့်အပူပေးပြီး ပျော်အောင်လုပ်ထားပါ)
Digestive biscuit ၁ ချပ်( မှုန်ညက်အောင် ခြေထားပေးပါ)
စတော်ဘယ်ရီကလွဲပြီး ကျန်တာအားလုံးကိုသမပြီး ညက်နေအောင် ရောမွှေထားလိုက်ပါ
စတော်ဘယ်ရီသီးလေးထဲက အသားကို ပုံပါအတိုင်းထွင်းထုတ်ပေးပါ
ချိစ်အရောကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်းစာလောက်ထည့်ပေးပါ
နောက် ချောကလက်ရည်ထဲတွင် စိမ်ပြီး Biscuit မှုန့်ကပ်ပေးပါ။
ဗန်းတစ်ခုထဲတွင် စီထည့်ကာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပေးပြီးရင်တော့ သုံးဆောင်ရန်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ
(အိမ်ကညီမကတော့ ကြိုက်လွန်းလို့ အကုန်ပြောင်အောင် အားပေးတယ်ရှင်)
Wow! good idea. wanna try